दुई नेपाली समेत घाइते हुने गरि ग्रीसमा भएको घटना के हो ? - Vishwanews.com
दुई नेपाली समेत घाइते हुने गरि ग्रीसमा भएको घटना के हो ?
काठमाडौं । अघिल्लो साता टर्कीबाट ग्रीस छिर्ने क्रममा एउटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेको छ । जसमा सवार ७ जनाको मृत्यु भएको छ । ८ जना घाइते छन् । घाइतेमध्ये दुई जना नेपाली नागरिक छन् । स्थानीय संचारमाध्यमका अनुसार यो साधन अवैध रूपमा टर्कीबाट ग्रीस छिर्न खोजेको थियो । गाडी तीव्र गतिमा भएका कारण अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको हो ।
बेलायती सञ्चारमाध्यम डेली मेलले लेखे अनुसार घाइते भएका मध्ये चार पाकिस्तानी र ३५ वर्षीय चालक छन् । दुर्घटना ग्रीसको राजधानी एथेन्सबाट ५ सय २ किलोमिटर पूर्वमा भएको हो । ग्रीस प्रहरीका अनुसार उनीहरू सबै संगठित मानव तस्करले अवैध रूपमा टर्कीबाट ग्रीस छिराउन खोजेका नागरिक थिए ।
दुर्घटनामा पर्ने नेपाली को हुन र कहाँ जान लागेका थिए भन्ने खुलेको छैन । नेपालीले टर्कीको बाटो हुँदै अवैध रूपमा यूरोप छिर्ने गरेको समाचार बेला बेला आउने गरेका थिए । मानव तस्करले १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएर नेपालीलाई यूरोप छिराउने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।